करिना कपुरको ठूलो बेबी बम्प देखेर झस्किएका आफन्तले भने ‘जुम्ल्याहा बच्चा छन् र ? बुढेसकालमा सैफले एकसाथ सेहार्लान् करिनाका ३ वच्चा ? – Gazabkonews
करिना कपुरको ठूलो बेबी बम्प देखेर झस्किएका आफन्तले भने ‘जुम्ल्याहा बच्चा छन् र ? बुढेसकालमा सैफले एकसाथ सेहार्लान् करिनाका ३ वच्चा ?
काठमाडौं । कारोना महामारीमा पनि सुटिगंमा ब्यस्त रहेकी नायिका करिना कपुर महामारीकै समयमा दोस्रो पटक आमा बन्ने तरखरमा छिन् । कोरोनाले गर्दा खासै बाहिर नहिँडेकी करिना पछिल्ला दिनमा भने फाट्ट फुट्ट रुपमा निस्किन थालेकी छिन् । हालै उनलाई घर बाहिर हिँडिरहेको अवस्थामा भेटियो ।
गर्भावस्थाको अन्तिम समयमा भएकोले पनि होला तस्विरमा करिनाको पेट ठूलै देखिएको छ । करिनाको पेटको आकार हेरेर धेरैले उनलाई उनको पेटभित्र जुम्ल्याहा छन् कि भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय मिडियामा एक पछि अर्के गर्दै करिनाका गर्भवती अवस्थाका तस्विरहरु बाहिरिएसँगै उनका फ्यान र आफन्तले समेत करिनाको पेटमा जुम्ल्याहा वच्चाा हुर्किरहेको आँकलन गर्दै सो प्रश्न तेर्स्याएका हुन् । सुत्केरी हुने दिन नजिकिएसँगै करिना अहिले हिँडडुल पनि गरेर शरीरलाई थप स्फुर्त बनाउन लागिरहेकी छिन् ।
करिना र सैफले आफ्नो सन्तानलाई घर भित्र्याउनका लागि तयारी पनि सुरु गरिसकेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
संघर्षका दिन सम्झिएर भावुक इन्दिरा, कसरी लुक्छ इन्दिराको प्रेम ?(हेर्नुस् भिडियो कुराकानी)
काठमाडौं– आइटम र डान्सिङ नम्बर गीतमा स्वर दिएर चर्चा कमाएकी गायिका इन्दिरा जोशीले यसपटक फरक र चेतनामुलक गीत लिएर आएकी छिन् । अन्तरजातीय प्रेमको कथामा बनेको ‘बेग हानी गा’को’ गीतमा पहिलोपल्ट इन्दिरा स्वयम्ले अभिनय गरेकी छिन् ।
यही सेरोफेरोमा उनीसँग गरेको कुराकानीका क्रममा इन्दिराले आफ्नो संघर्षका दिनदेखि प्रेमसम्मका कुराहरु गर्न भ्याएकी छिन् । अन्य नेपाली सेलिब्रेटीहरुको प्रेम खुलेर सार्वजनिक भइरहँदा किन इन्दिराको सधँे लुकिरहेको छ ? इन्दिरा नेपाली फिल्ममा हिरोइन बनेर आउने सम्भावना कति छ ?